C/Kariim Xinif oo Daboolka Ka qaaday inaanu cidna u dabo-fadhiisanayn inuu u ololeeyo KULMIYE | Somaliland.Org
C/Kariim Xinif oo Daboolka Ka qaaday inaanu cidna u dabo-fadhiisanayn inuu u ololeeyo KULMIYE
November 9, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- “Guddidu waxay yidhaahdeen waxa jira masuuliyiin dawladda ah oo ku milmay xisbi, anigu maan fahmin arrintaasi. masuuliyiintu xisbi bay ka mid yihiin, waana waajib saaran inay xisbigooda u ololeeyaan, kuwa ololaynayaa waa kuwee inay taasi kala caddeeyaan, waxaanay ahayd inay yidhaahdaan shaqaale dawladdeed oo taasi aniga u odhanaya,”ayuu yidhi Agaasimaha Maamulka Komishanka ka hotrtaga AIDS-ka C/kariim Yuusuf (Xinif).
Mr. C/Kariim Xinif waxa uu intaasi ku daray “Xeerka shaqaalaha dawladdu anniga oo kale ima qabanayo, marka laga hadlayo shaqaale dawladeedna illaa madaxweynuhu waa shaqaale dawladdeed.”
“laakiin waxa jira wax lagu kala saaro oo ah darajooyin ay shaqaaluhu leeyihiin, taasi oo lagu siiyo guno marka ay hawl gabaan, balse annaga oo kale masuuliyiin markaanu nahay waxa la diiday in lanaga jaro 1% oo shaqaalaha laga jaro, lana siiyo marka ay hawl gab noqdaan.”
“Markaa aan anigu maanta ka tago halka aan hayo ma yeelanayo lacagtii gunada ee hawlgabka marka uu qofku meesha ka tago la siinayey,”ayuu yidhi C/Kariim Xinif.
C/Kariim Xinif waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa aasaaseyaashii xisbiga KULMIYE isla markaana aanu cidna u dabo fadhiisanayn inuu u ololeeyo xisbigiisa.
Previous PostBooboow waa laguu dul-qaadanayaaye’e dadka ha caayin,qoraalkaagana khaladka ka buuxa eegNext PostWasiirka Madaxtooyadda oo dalka ku soo laabtay, kana war-bixiyay socdaalkiisii Ingiriiska	Blog